India oo qorshaynaysa inay 18 safaaradood ka furato Afrika, sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalka Narendra Modi. - BBC News Somali
India oo qorshaynaysa inay 18 safaaradood ka furato Afrika, sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalka Narendra Modi.
Narendra Modi wuxuu xilka hayey tan iyo 2014
Hadalkaas ayuu Mr Modi ku soo qaaday khudbad uu u jeedinayey baarlamaanka Uganda, waana markii ugu horreysay ee uu baarlamaanka dalkaas la hadlo ra'iisul wasaare Hindi ah oo xilka haya.
"Dadkeenna waxaa ka mid ah qaar badan oo isku xiraya Uganda iyo India" ayuu Mr Modi yiri.
"Hogaamintaada aragtida leh ayaa ka caawisay dad reer Uganda ah oo asalkoodu yahay Hindi inay dib u laabtaan oo dalkooda dhistaan" ayuu ku yiri Mr Museveni.
India waxay sare u qaadi doontaa maalgashigeeda Afrika, waxayna suuqyadeedu u furnaan doonaan dalalka Afrika "si loogu fududeeyo, loona soo jiito inay ganacsi la yeeshaan India" ayuu yiri Mr Modi.
Hindiya iyo Afrika oo shiraya
Soomaali jeclaaday gabar Hindi ah
Tareen ku habaabay dalka Hindiya
"India way idiin shaqayn doontaa, wayna idinla shaqayn doontaa; waxaan idinku dhinac taagannahay hammigiinna. Waan idiin hadlaynaa waana wada hadlaynaa" ayuu ku daray Mr Modi.
Wuxuu sheegay in seddex meelood oo laba dadka India iyo Uganda ay dad'doodu ka yar tahay 35 sano, "haddii mustaqbalka uu dhallinyaradaas faa'iido u leeyahayna waxaa iminka la joogaa wakhtigii la dhisi lahaa" ayuu yiri.